Shirwaynihii Xaqiijinta Cadaalada Iyo Horumarka DDSI Ee Shacabka Iyo Xukuumada Oo Maanta Jigjiga Kafurmay. - Cakaara News
Shirwaynihii Xaqiijinta Cadaalada Iyo Horumarka DDSI Ee Shacabka Iyo Xukuumada Oo Maanta Jigjiga Kafurmay.
Jigjiga(CN) Axad.June.14.2015, shirwaynihii xaqiijinta cadaalada iyo horumarka ee shacabka iyo xukuumada DDSI ayaa maanta ka bilaabmay caasimada Jigjiga ee xarunta DDSI, waxaana kasoo qayb galay shirwaynahan caadiga ah hogaaminta ugu saraysa DDSI oo uu kamidyahay madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar, Gudoomiyaha XDSHSI mudane Maxamed Rashiid Isaaq, Kuxigeenka Madaxwaynaha ahna wasiirka waxbarshada DDSI mudane Mowliid Haayir Xassan, ergooyinka 68 degmooyin, 9 ka gobol, maamul magaalooyinka oo isugu jiray qaab dhismeedka kala gadisan ee shacabka iyo xukuumada.
Shirwaynahan oo saaka bilaabmay madasha shirarka ee SMCX ayaa waxaa daah furay madaxwayne Cabdi Maxamuud Cumar oo si qoto dheer uga hadlay sooyaalkii deegaanku soo maray iyo tabihii looga gudbay caqabadihii xiliyada qaar jiray ee dhanka siyaasadeed, nabadgaliyo iyo horumarka.
Madaxwayne Cabdi Maxamuud Cumar ayaa si fahan dheer leh uga warbixiyay cadaadiskii Derginimo iyo isbadalkii curtay ee EPRDF oo aysan DDSI ka faaiidaysan ururadii nabadiidka ee jiray awgeed, wuxuuna madaxwaynuhu soo jeediyay qaabkii cilmiyaysnaa ee looga gudbay caqabadihii nabadgaliyo daro iyo horumar daro ee salka kuhayay ururadii nabadiidka oo isticmaalayay qabyaalad iyo dano khaas ah.
Dhibaatooyinkii xiligaas ayuu madaxwaynuhu sheegay in ay nabadiidku kasii shidaal qaadanayeen isgaadhsiin la'aantii, jid la'aantii iyo biyo la'aantii oo ay UBBO kasii faaidaysanaysay. Waxaa dhacay dil, dhac, kufsi, iyo cadaalad daro. Wuxuuna M/waynuhu tilmaamay inay ugu horeeyeen Ataxaad cadaaladaradana oo ay ubbo kusii shidaaliyeen.
Maamuladii xiligaasi ee haayadaha nabadgaliyada oo cadaalad daradu ugu badnayd iyagoo hogaamin ah oo UBBO ah ayay hadana dadka Ubanimo ku qiimanayeen. Tusaale waxaa shaqaalaha caafimaadka iyo beeraha loo dhiibayay qoryaha iyagoo la amrayay inay nabadiid soo qabtaan balse hubka laga guran jiray maadaama aysan tababar dagaal iyo shaqadoodiiba ahayn taasoo ay UBBO u taqaanay Bakhaarka Wareega ayuu yidhi madaxwaynuhu.
Hadaba waxaa wakhtigii 1999 ama 2000 ee tirsiga dalka labilaabay halgan dhab ah oo kasoo go'ay shacabka waxaana dastuurka dalka iyo deegaankaba lagu hirgaliyay ciidamada gaarka ah ee Liyuu Booliska waxaana si cilmiyaysan loola halgamay nabadgaliyo daradii iyo cadaalad daradii ku habsanayd shacabka deeaanka, kadibna waxaa lasugay nabadii deegaanka oo dhamaystiran. Waxaana guud ahaanba meesha laga saaray beentii nabadiidka ee dalka iyo dibadaba.
Sidoo kale madaxwaynuhu waxaa uu soo bandhigay warbixinada halganka horumarka sida kaabayaasha dhaqaale, biyaha iyo horumarkii aas aasiga ahaa. Dhanka kale waxaa uu madaxwaynuhu si gaar ah uga hadlay ahmiyada dumarka iyo dhalinyarada iyo sida ay laf dhabarta ugu yihiin horumarka, waxaana hadaladiisa kamid ahaa "Raggu si uu wax u noqdo dumarkeena aynu xooga saarno."
Shirwaynaha oo maanta labadii galinba kasocda hoolka SMCX ayaa galabta waxaa galabta laga hadlay lagana dooday arimaha salka u ah horumarka oo ay kamid tahay cadaalada taasoo uu madaxwaynuhu sheegay in cadaaladu ay tahay mida kaliya ee lagu xaqiijin karo horumar waana mid looga baahanyahay qoys ahaan ilaa qaran ahaanba dhamaan ayuu yidhi madaxwaynuhu. Sidoo kale waxaa laga hadlay arimaha xagjirka oo ah cadaaladarada halka ay ka curato.
Shirwaynahan caadiga ah ee sanad walba xiligan oo kale laqabto ayaa wuxuu kaga duwanyahay kuwii hore iyadoo maanta si xeel dheer horumarka looga arinsanayo islamarkaana heerkii ugu saraysay ee maamul suuban ajendayaashiisu yihiin sida kaqaybgalka bulshada, xoojinta cadaalada iyo horumarka. Sidoo kale waxaa uu kusoo beegmay wakhti ay doorashadii 5aad ee dalka iyo deegaankuba sidii ugu nabada iyo habsamida badnayd uga dhacday iyo wareegii labaad ee qorshaha isbadalka iyo koboca dhaqaalaha (GTP2) oo lagalayo.
Kala soco CakaaraNews Shirwaynahan wadatashiga shacabka iyo xukuumada DDSI ee xaqiijinta cadaalada iyo horumarka oo astaan u ah maamulka suuban ee xukuumada DDSI. Waxaana barito si balaadhan looga doodi doonaa qodobo kamida horumarka, xagjirka iyo argagixisada oo uu gurigu kahadli doono.